कहाँबाट आयो रेखाको खातामा १ अर्ब भारतीय रुपैंयाँ ? - Arghakhanchi Saptahik
कहाँबाट आयो रेखाको खातामा १ अर्ब भारतीय रुपैंयाँ ?
भारतमा गरिएको भारतीय ५ सय र १ हजारको नोटमाथीको प्रतिबन्धपछि भारतीय बजारमा अनौठा अनौठा घटना घट्न थालेका छन ।
नोटमाथीको प्रतिबन्धपछि सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन
थालेको छ । कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि कालोधन लुकाउनका लागि बैंकसँगको मिलेमतोमा यसरी सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ।
यस्तै घटना भारतको मैनपुरीमा सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँकी एक महिला प्रहरी जवानको बैंक खातामा अचानक करिब एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । यसरी आफ्नो खातामा एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि ती महिला आश्चर्यमा परिन् । उनले सो
जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गराएकी छन् ।
आग्रा घर भएकी रेखा रजौरियाको बैंक खातामा यती धेरै रकम जम्मा भएको हो ।
उनले वषौं अगाडि आग्रामा रहेको एसबीआई बैंकको शाखामा खाता खोलेकी थिइन् ।